Dhalinyaro ku eedeysnaa fal Shabaabnimo oo dil toogasho ah lagu xukumay (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dhalinyaro ku eedeysnaa fal Shabaabnimo oo dil toogasho ah lagu xukumay (DHAGEYSO)
Wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka Puntland ay xukunno dil ah ku riday 7 nin oo lagu soo eedeeyay inay ka tirsan yihiin Al-shabaab iyo dilal qorsheysan oo ay halkaasi ka geysteen.
Maxkamadda maamulka Puntland ayaa dhalinyaradaasi ku eedeeysay inay magaalada Boosaaso ku dileen mas’uuliyiin ka tirsan maamulkaasi iyo sidoo kale dad rayid ah.
Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamukla Puntland C/fitaax Xaaji Aadan ayaa ku dhawaaqay xakunka dhalinyaradaasi, wuxuuna sheegay in xakunka lagu riday dhalinyaradaasi uu ka furan yahay rafcaan muddo 30 maalmood guddahood ah.
Qaar ka mid ah dhalinyaradaasi xukunka lagu riday oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inaysan jriin wax dambi ah oo ay geysteen, islamarkaanaa lasoo qabtay xilli ay ku sugnaayeen guryahooda iyo goobahooda ganacsi.
Dhalinyarada xukunka lagu riday ayaa kala ah:-
1- Nuuradiin Axmed Samatar Deerow – 22 sano jir
2- Ayuub Yaasin Cabdi – 32 sano jir
3- Cali Ismaaciil Cali (Cali Gaab) – 20 sano jir
4- Xasan Aadan Xasan Maxamed – 22 sano jir
5- C/xakiin Maxamed Aweys – 24 sano jir
6- Maxamed Yaasiin Cabdi Maxamuud – 17 sano jir
7- Daa’uud Siciid Sahal – 18 sano jir